Kaominina Antananarivo Renivohitra Manampy ny olona hiady amin’ny tsy fandriampahalemana
Paraky, Namontana, Marais Masay Mirongatra ny asan-jiolahy
Tsy an-tsaha tsy an-tanàna ny tsy fandriampahalemana fa saika manerana ny Nosy.
Halatra finday avo lenta Tovolahy iray 22 taona no voasambotry ny SUT
Ny 13 janoary 2018 lasa teo, tovolahy iray 22 taona no voasambotry ny Polisin’ny SUT teny Itaosy noho ny resaka halatra finday.
Faritra Itasy Misedra olana ny tantsaha
Mikaikaika ny tantsaha any amin’ny faritra Itasy noho ny tsy fandriampahalemana, indrindra tamin’ny taona 2018 lasa iny.
Fangalarana Starex sy famonoana mpamily Olona 7 no voasambotra teny Ankazobe
Tanora fito mianadahy, 21 hatramin`ny 25 taona no voasambotry ny polisy misahana ny ady heloka bevava noho ilay raharaha fangalarana fiara Starex sy famonoana ny mpamily azy.
Mirongatra sy mahazo vahana hatrany ny asan-jiolahy eto amintsika. Ankoatra ny sinto-mahery sy ny hala-botry dia misy hatrany ny vaky trano, antony manosika ny kaominina Antananarivo Renivohitra hanamafy ny fanentanana ny mponina tsy an-kanavaka amin’izao fotoana izao.
Tafiditra ao anatin’izany ny fandraisana andraikitra amin’ny fampandrenesana ny mpitandro ny filaminana faran’izay haingana raha vao misy tranga mampiahiahy. Tsiahivina fa miasa ho an’Antananarivo sy ny mponina rehetra ao aminy ny kaominina. Tsy ny fanesorana ny fako ihany no asa fanadiovana tsy maintsy hataon’izy ireo fa eo ihany koa ny famongorana ny asan-jiolahy. Tsy maintsy misy ny fifanomezan-tanana hananan’ny isan-tokantrano filaminana sy fitoniana amin’izao ankatoky ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao. Tsiahivina fa efa omen’ny kaominina maimaimpoana ao anatin’ny fanentanana hatao ny laharana hahazoana ireo mpitandro ny filaminana eto an-drenivohitra sy ny manodidina.